Boldenone Undecylenate (Equipoise) Ihe onwunwe (13103-34-9) | AASraw
/ ngwaahịa / Anabolics Steroids / Boldenone ntụ ntụ / Boldenone Undecylenate (Equipoise) Ihe onwunwe
4.33 si 5	dabere na 3 ahịa Fim
SKU: 13103-34-9. Categories: Boldenone ntụ ntụ, Anabolics Steroids
AASraw nwere ikikere na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke Boldenone Undecylenate (Equipoise) Ihe onwunwe (13103-34-9), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkwa mma.
Boldenone Undecylenate (Equipoise) Video ihe onwunwe
Boldenone Undecylenate (Equipoise) Ihe onwunwe ndị bụ isi bụ Characters
aha: Boldenone Undecylenate (Equipoise) Ihe onwunwe
Molekụla Formula: C30H44O3
Ọbara arọ: 452.6
Nchekwa Nche: -20
agba: Mmiri odo
Boldenone Undecylenate Ihe onwunwe eji eme ihe na steroid steroid
Ngwado aha ndi ozo
Ngwa ihe eji eme ihe nke ọma bụ Bold U, BU, Equipoise Raw material, EQ site na bodybuilders ma ọ bụ ndị nwe UGL.
Boldenone Undecylenate (Equipoise) Akụrụngwa ihe eji eme ihe
Boldenone Undecylenate A na-ejikarị ihe onwunwe eme ihe dị ka mmanụ a gwara ya. N'ahịa, e nwere 200mg / ml, 250mg / ml, 300mg / ml, ụfọdụ UGL mere 350mg / ml na 400mg / ml. Ma, ọ ga-esi ike nke ukwuu ka a gbanye ya.
Boldenone Undecylenate Ihe onwunwe buru ibu bụ nke yiri hormonon Dianabol, ma e wezụga Dianabol hormone bụ maka ojiji ojiji na nke nwere 17AA onyinye na nke a naanị nwere awa asatọ ọkara ndụ. Ngwa ngwa ngwa anaghị agụnye òtù 17AA nke na-eme ka Dianabol dị mkpụmkpụ, na-eme ka EQ nọrọ n'ime ahụ ruo ogologo oge ma mee ya ka ọ dị irè karị maka iwuli elu na ike.
Boldenone Undecylenate Ihe ndị ọzọ, nke a na - akpọkwa EQ, na - eji ndị mmadụ na ndị na - eme egwuregwu iji mee ka ahụ ike ha dịkwuo elu, nwekwuo ntachi obi na - emepụta ọbara ọbara n'ime ahụ nke na - enyerekwa ntachi obi aka n'ihi na ọbara ọbara ọbara na - ebu oxygen na ọ bụrụ na ọbara gị bara ọgaranya oxygen, ị na-anọ ogologo oge n'oge nrụgide siri ike ma ọ bụ arụmọrụ. Boldenone Undecylenate Ihe onwunwe, ma ọ bụ EQ na-ewu ewu n'etiti ndị na-eme egwuregwu, ndị na-arụ ọrụ ozu na ndị na-eme ahụike n'ihi na ọ na-enye uru dị nta ma bụrụ nke na-adịgide adịgide n'ogologo oge ikuku. A na-akpọ usoro ntụrụndụ ndị a uru uru EQ. EQ nwere ike ịnye ya na doses nke sitere na 200mg gaa na 600mg kwa izu maka ihe karịrị izu iri na abụọ.
Ịdọ aka ná ntị na Boldenone Undecylenate Ihe onwunwe
Dị ka ọtụtụ ndị kwuru, ị gaghị ewere Clen karịa izu 2 n'usoro. Nke a bụ n'ihi na ndị natara ahụ chọrọ oge iji tọgharịa na Clen agaghị adị irè ma ọ bụrụ na ị gaghị eme ezumike, ọ nweghịkwa nkwa na ndị natara gị ga-abụ otu.
Ọ bụ ezie na ọ nọgidere na-arụsi ọrụ ike ruo oge dị ogologo karị, a na-agbanye ihe ndị e ji emepụta ngwá ọrụ Equipoise dịkarịa ala otu ugboro kwa izu site na ndị na-eme egwuregwu. A na-ejikarị ya eme ihe na 200-400mg (4-8 ml, 50mg version) kwa izu maka ụmụ nwoke, 50-75 mg kwa izu maka ụmụ nwanyị. Kwesịrị ịbụ 25mg mbipute naanị ngwaahịa dịnụ, obere injection nwere ike ịghọ ihe na-adịghị mma. Usoro nke usoro onu ogugu nwere ike kewawanye uzo, ikekwe injections nyere kwa ubochi iji belata nsogbu. Mmadụ kwesịkwara ịkpachara anya ka ọ gbanwee ebe ogwu na-agagharị mgbe nile, iji zere iwe ma ọ bụ ọrịa. Ọ bụrụ na a gbanye nnukwu mmanụ ka ọ bụrụ otu n'ime saịtị ahụ, abanye nwere ike ịchọta nke chọrọ ịwa ahụ. Iji zere nsogbu dị otú a, ndị na-eme egwuregwu na-ejikarị njigide ọ bụla ejiri 3ml mee ihe ma jiri saịtị ọ bụla karịa otu ugboro kwa izu, ọkacha mma kwa izu ọ bụla. Ngwunye ihe eji akwado ihe nke a nwere ike ịchọ iji ọ bụghị naanị na onye nwere obi ụtọ, kamakwa n'apata ụkwụ a maka ebe ogwu. O doro anya na nsogbu niile metụtara 25mg na 50mg na-azụta ngwaahịa na-ewepụ ya na 100 mg ọhụrụ na 200mg / ml nsụgharị nke steroid ahụ, nke mere ka onye ọrụ nweta ọtụtụ nnwere onwe na ịgba ọgwụ.
Aghaghachi azụ dị ukwuu nke ihe onwunwe Equipoise Raw bụ ogologo ndụ ya, nke bụ ma ọ dịkarịa ala 12 ụbọchị. Nke a na - ebute ogologo oge mgbe ọgwụgwụ nke ikpeazụ mgbe ọkwa ndị ahụ adịghị ezu maka ezigbo anabolism, ma ọ bụ dị ala iji kwe ka mgbake gbanwee. Ihe ngwọta maka nsogbu a bụ iji ngwa ngwa ngwa ngwa na akụkụ nke mbụ.
E wezụga mmasị nke EQ n'elu Dianabol, ihe onwunwe Equipoise Raw na-adịbeghị anya na-eto eto ma bụrụ ihe kachasị amasị ndị ọkụ eletrik. Ndị ọkachamara tụlere EQ dịka nchọta a họọrọ maka Deca Durabolin, nanị maka eziokwu ahụ na ike nweta na àgwà nke ikuku ike na EQ na-eme na-enweghị mmetụta mmetụta ọjọọ nke Deca. Tụkwasị na nke ahụ, EQ na-emetụta nsụgharị ọbara n'ime ahụ, nke na-enye ahụ ike nke ahụ gị na oke ọbara nke ha chọrọ n'oge ọzụzụ siri ike nke ọzụzụ na / ma ọ bụ ebuli.
Ọ bụghị onye na-eme ngwa ngwa na-ewu ihe ngwa ngwa, kama a ga-eleba anya na ngwa ngwa ngwa ngwa iji nweta nguzo dị nro ma bụrụ nke na-adịgide adịgide nke ike na ogo ahụ ike. A na-ahụ mmetụta kachasị mma nke ọgwụ a mgbe a na-eji ya maka ogologo oge cycles, na-adịgide adịgide karịa izu 8-10. Ọkpụkpụ anụ ahụ ekwesịghị ịbụ obere ihe dị mma a hụrụ na androgens, ma akọwapụtara ma sie ike. Ebe ọ bụ na mmiri agbanyeghị na-atụnye ụda dị ukwuu na mpekere nke ahụ ike, ihe dị ukwuu nke nha nke a na-enweta na ngwongwo nke Equipoise Raw onwunwe nwere ike ịchekwa mgbe a kwụsịrị ọgwụ ahụ. Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị ịchọta na ihe eji emepụta ngwa ngwa na ihe eji egwu ọgwụ Dianabol bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu. N'ihe banyere Equipoise Raw material, onyinye ahụ na-eji l7beta ester (undecylenate), mgbe Dianabol bụ 17 alpha alkylated. E wezụga nke a, mkpụrụ ndụ ahụ bụ otu. O doro anya na ha na-eme nnọọ n'ụzọ dị iche iche na ahụ, nke na-egosi na 17-methylation na-emetụta karia nani ọrụ nke steroid.
Nke a bụ ihe dị mkpa nke testosterone na ihe nkwakọba ihe nke Equipoise Raw. Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ ahụ na-enye ohere maka usoro ọgwụgwọ zuru ezu nke testosterone, n'achọghị ịchụ àjà dị ukwuu n'ihe gbasara uru ndị a na-atụ anya ya. E kwesịrị iji ihe nchịkọta a na-edozi estrogens, ma ka ga-eru ebe ọ na-enyere aka n'ịkwalite ọnọdụ anabolic. Nnukwu nchịkọta anụ ahụ na-amalite. Akwa okirikiri maka niile na-amalite na bodybuilding na ndị ọzọ na-achọ inweta uka. Mkpụrụ obi na-ebute uru dị ukwuu na-emetụta ihe dị ukwuu na androgen.
Boldenone Undecylenate Ihe onwunwe
EQ bụ ụdị mmiri mmiri. Min iji 10grams / 10ml.
Boldenone Undecylenate Ihe onwunwe Marketing
Esi zụta Boldenone Undecylenate Ihe onwunwe: zụta Equipoise Ihe onwunwe si AASraw
AASraw na-enye aka ọcha 98% Boldenone Undecylenate / Kwadebe raw ntụ ntụ na bodybuilders ma ọ bụ n'okpuruala labs maka ogwu ojiji.
Ngwado ihe ndi ozo Ntuziaka:
10G Boldenone Undecylenate Ihe onwunwe mmiri mmiri
16ML Mkpụrụ Mkpụrụ Epeepe (GSO)
12G Boldenone Undecylenate Ihe onwunwe mmiri mmiri